Safo lena ho an'ny alika: ny tsara indrindra ho an'ny biby fiompinao | Tontolo alika
Ny alika, toy ny biby izy ireo, dia mety ho tsinjovina. Ny olana dia matetika isika manandrana manala ireo tasy ireo amin'ny fikosehana, fa tsy manao soa amin'ny biby fiompy dia manimba azy ireo. Noho izany, mamafa lena ho an'ny alika afaka manampy anao izy ireo.
Manana fampiasana maro izy ireo: manomboka amin'ny fanampiana ny alika kely hanadio azy ireo rehefa manamaivana ny tenany izy ireo (na manitsaka azy ireo) ka hatramin'ny fanadiovana ny tongotry ny olon-dehibe rehefa avy nandehandeha teny amin'ny arabe izy ireo. Te hahafantatra ve ianao hoe iza no tsara indrindra mamafa ny alika ary inona no tokony hoheverinao alohan'ny hividianana azy ireo? Vakio hatrany dia ho hitanao izany.
1 Karazana famaohana lena ho an'ny alika
1.2 Miaraka amin'ny chlorhexidine
1.3 Miaraka amin'ny hanitra talcum
1.4 Miaraka amin'ny aloe vera
1.6 Tsy misy menaka manitra
2 Zava-dehibe ve ny famonoana otrika ny alika rehefa avy eny an-dalambe izy io noho ny Covid-19?
3 Afaka mampiasa solo-jaza ve aho hanadio ny alika?
4 Aiza no hividianana solo-alika
Karazana famaohana lena ho an'ny alika
Inodorin Wipe ...
Famafana fikolokoloana an'i Pogi -...
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra momba ny famafana ny alika dia tsy ny karazany iray ihany. Tsy marika iray akory. Izany no antony mety ho sarotra kokoa ny mifidy ny iray na ny iray.
Na izany aza, tsy maintsy tadidinao ny alikanao. Manana hoditra mora tohina ve ianao? Tsy tianao fofona manitra na cologne anaovanao? Matetika ve ianao manana hoditra marefo sy voarangotra sa efa antitra? Izay rehetra hahatonga anao hisafidy karazana iray na karazany hafa.
Noho izany, eny an-tsena no ahitanao:
Izy ireo dia soloina azo esorina. Tena mora vidy ireo ary ampiasaina irery. Ankoatr'izay dia mikarakara ny tontolo iainana izy ireo amin'ny alàlan'ny fahalovana amin'ny masoandro, rano, zavamaniry ...
Miaraka amin'ny chlorhexidine
Ho an'ny alika izay matetika mamakivaky faritra be vato, ala sns. Mety hiafara amin'ny ratra kely izy ireo, indrindra amin'ny tongony. Chlorhexidine dia ampiasaina, ohatra, amin'ny aretin-nify, na amin'ny famonoana otrikaretina.
Raha matahotra an'i Covid ianao dia mety ho iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanadiovana ny alikanao alohan'ny hidirany ao an-trano mba tsy hiarovana anao fotsiny, fa ny alikanao koa.
Miaraka amin'ny hanitra talcum
Misy ny olona mahatsapa fa raha tsy mamofona ny famafana alika dia tsy hamarana ny fanadiany izy ireo. Ny sasany maniry fotsiny ny alika "hanitra tsara" rehefa manadio. Ary amin'ity tranga ity dia afaka mahita famafana misy fofona talcum ianao, izay mampatsiahy antsika ny fahazazantsika.
Miaraka amin'ny aloe vera
Mamafa ny fidiovana PorrINI ...
Fantatsika fa ny aloe vera dia manana tombony betsaka, indrindra ho an'ny hoditra. Ka ny alika vera sasany dia mamafa namaoka no mety ho tsara indrindra ho an'ireo izay manana hoditra mora tohina na mila fitandremana fanampiny.
Famafana fikolokoloana an'i Pogi ...
Mampiavaka azy ireo ny famelana fofona mahafinaritra amin'ny faritra anaovanao azy. Amin'ity tranga ity, ho an'ny alika dia mety ho manerana ny vatany, amin'ny tongony, sns.
Tsy misy menaka manitra
Mety ho an'ireo alika izay tsy tia fofona "olombelona". Izy ireo mamafa izany "Tsy maimbo" mihoatra ny fofona azony amin'ny vokatra entiny diovina izy ireo.
Zava-dehibe ve ny famonoana otrika ny alika rehefa avy eny an-dalambe izy io noho ny Covid-19?
Rehefa nipoaka ny areti-mandringana Covid dia be ny tsy fahalalana. Nisy ny nanoro hevitra fa, rehefa mody any an-trano dia tokony diovina ny faladian'ny kiraro mba hialana amin'ny fidiran'ny viriosy amin'ireo trano. Ary mazava ho azy fa nanoro hevitra ny tompona alika mba hanao toy izany koa amin'ny bibiny, amin'ny famafana lena ho an'ny alika.
raha ny marina, Tsy noho ny fisian'ny Covid intsony izany fa noho ny olana momba ny fahadiovana. Ny alika dia tsy manao kiraro, noho izany dia manitsaka tsy tapaka ny tany izy, izay mety feno mikraoba, bakteria ary viriosy. Rehefa manan-janaka ianao dia fantatrao fa tsy maintsy tandrovina ny fahadiovana, midika izany fa tsy maintsy madio ny alika, toy ny tany eo amboniny ihany. Noho izany, asaina mamono otrikaretina alika amin'ny ankapobeny, tsy noho ny fisian'ny coronavirus ihany.
Ankehitriny, ary amin'ny tranga manokana an'ny Covid? Marina ny anao, tsara kokoa ny mamono otrikaina alohan'ny hidirany Satria tsy hianjera amin'ny gorodon'ny trano fotsiny izy io, fa afaka milelaka ny tongony koa, ary miaraka aminy, mampitombo ny fahafahan'ny otrikaretina (satria nisy ny alika sy saka marary).
Afaka mampiasa solo-jaza ve aho hanadio ny alika?
Tompon'alika maro no manapa-kevitra ny hamafa zaza amin'ny fampiasana biby bebe kokoa (ho an'ny biby fiompy). Fa ny marina dia tsy soso-kevitra izany. Ary, na dia misy zavatra sasany ampiasan'ny olombelona azontsika ampiasaina amin'ny biby aza, misy ny hafa izay miteraka olana bebe kokoa noho ny tombony. Ary iray amin'izany ny fanasana zaza.
Fa maninona no tsy azo ampiasaina ireny mamafa? Satria ny hoditry ny biby dia tsy mitovy amin'ny an'ny zazakely. Eny, fantatsika fa malefaka sy tsy miandany araka izay azo atao ireo famafana ireo, fa ny pH an'ny zazakely dia tsy an'ny alika ary indraindray ny fampiasana ireo dia mety hiafara amin'ny fanelingelenana ny hoditry ny alika, na fanindronana mihitsy aza, ka hahatonga anao io hikorontana ary mety handratra ny tenanao.
Noho izany, araka izay tratra, tsy mamporisika anao hampiasa ireo izahay ary manoro ireo izay manokana ho an'ny alika. Ireto famafana fahadiovana ho an'ny alika ireto dia namboarina ary namboarina tamin'ny akora izay fantatra fa tsy misy fiantraikany amin'ny hoditry ny biby ary, raha tsy hoe mora tohina dia tsy hanana olana ianao.
Aiza no hividianana solo-alika
Tsy fantatrao hoe aiza no hividianana solo-alika? Aza manahy fa manome soso-kevitra izahay toerana vitsivitsy izay azonao ividianana azy ireo. Makà!
Amazon: Manana tombony i Amazon Amidiny ny solo-drano lena ho an'ny alika misy marika maro, ary indraindray ianao dia afaka mahita fonosana mora vidy kokoa aza. Marika, habetsahana ary karazany isan-karazany. Tombony ho an'ity fivarotana ity noho ny kely kokoa.
mercadona: Fantatr'i Mercadona fa lasa zava-dehibe ho an'ny fianakaviana ny biby fiompy. Ary izany no antony amin'ny andiam-vokatra natokana ho an'ny biby dia afaka mahita karazany maro ianao (na dia marika iray monja aza). Raha ny famafana lena ho an'ny alika dia tsy nahita izahay. Ka raha asainy mampiasa zazakely ianao dia aza mividy, satria tsy mety amin'ny alika izy ireo.
kiwiko: Kiwoko dia fivarotana iray manokana ho an'ny biby fiompy ary, amin'ity tranga ity, ho hitanao ny hamafa alika. Tsy afaka milaza aminao izahay fa hahita marika ianao, fa ireo kosa mivarotra dia satria tena fantany fa amidy izy ireo ary tompona maro no faly miaraka amin'izy ireo.
MatetikaToa an'i Kiwoko, mifantoka amin'ny biby fiompy koa i Tíanimal. Raha ny mamafa lamba lena ho an'ny alika dia ho hitanao ny karazany saika mitovy amin'ny fivarotana hafa. Samy hafa izy ireo amin'ny marika sasany, ary amin'ny vidiny, fa ny zavatra tsara dia izany Ireo no atokisan'ny matihanina manam-pahaizana ary azonao antoka fa nanao ny asa izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Fafao lena ho an'ny alika